Cashier | TALK OF THE TOWN CAFE AND BISTRO ﻿
9.10.2019, Full time , Restaurant / Food Service
Company: TALK OF THE TOWN CAFE AND BISTRO
TALK OF THE TOWN CAFE AND BISTRO
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆက်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ကွန်ပျူတာ (Microsoft Word, Excel) အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location Suite-504, 5th Floor, Excel Treasure Tower, 520, Kaba Aye Pagoda Road, Shwe Gon Dine, Bahan Township, Yangon.
Company Industry: Restaurant/Food Service
131 Days, Full time , Restaurant / Food Service
•	Cooktail နှင့် Coffeeပိုင်းအသင့်အတင့်နားလည်ရမည်။ •	စကားပြောပြေပြစ်၍စည်းကမ်းပိုင်းလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်မည်။
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးလူအများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်၍သည်းခံဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ •	ကြိုးစား၊တက်ကြွ၍ညဆိုင်းဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	သွက်လက်ချက်ချာ၍စကားပြောပြေပြစ်သူ၊ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆက်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Comis-1 and 2
177 Days, Full time , Restaurant / Food Service
•	နားမလည်သည်များကို သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိရမည်။
Admin and Pruchaser
•	Accounting နှင့်ပတ်သက်သည့် Computer Software Program များကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	Good communication and organization skills •	Possesses Food Hygience Certification will be an advantage.
Cashier Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon TALK OF THE TOWN CAFE AND BISTRO Accountancy Jobs Accountancy Jobs Restaurant/Food Service Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Kayin State 25 Days